I-50 EPHEZULU KAKHULU EYAKHELWEYO KWIINGCALI ZEGRILL-UYILO LWANGAPHANDLE LOKUPHEKA - UYILO LWEKHAYA
I-50 ephezulu kakhulu eyakhelweyo kwiiNgcali zeGrill-Uyilo lwangaPhandle lokuPheka
Kwabathandi bokwenene be-barbeque, lonke ixesha lonyaka lixesha lokugcoba, kodwa masinyaniseke, ehlotyeni kulapho iziqhamo-okanye siza kuthi inyama-zomsebenzi we-grill master zithathe indawo ephambili.
Ngoku lixesha lokupheka ixesha elide, elincanyiswe lilanga kunye nabahlobo kunye nabamelwane, kwaye yeyiphi indlela ebhetele yokubonisa izakhono zakho kunokuba nesakhelo sangaphandle esakhelwe wena?
I-grill yangaphandle ayithathi nje ikhefu lakudala ukuya kwinqanaba elitsha, kodwa ibonelela ngokongeza okuxabisekileyo kwikhaya lakho. Kwaye kunye noyilo lobugcisa obuninzi obubonakaliswayo kolunye losasazo oluphambili lwanamhlanje, iintsuku ze-gauche grilling zikude emva kwethu.
Ilitye elikhuselweyo kunye nezitena zerustic zezinye zeendlela ezinokukhethwa zilindele umntu ofuna ukubuyisa ukoyisa kwakhona kwifom yobugcisa efanelekileyo; I-Tuscan kunye ne-cabana-style inspirations nazo zininzi ukudibanisa kunye nesitayela sasemva kwendlu kunye nobubanzi.
Kulabo abanomdla wokuhlangana ngaphandle kwaye kuphela kweyona migangatho mihle yokugcoba, ezi ziyi-50 eziphambili ezakhelwe kakuhle kwimibono ye-grill sisango lakho langaphandle eliya kwinethiwekhi efanelekileyo yecucina ngaphaya nje kwendlu yakho yangaphandle. Kutheni usilwa nomzabalazo we-amateur xa unokonwabisa kwaye upompa iphalethi yakho njengelungu le-elite?
Ihlobo linokuthembisa ngaphezulu kobushushu obushushu obuninzi, kodwa i-grill yakho eyakhelweyo iya kuguqula ubushushu bube yinto emnandi, kwaye kufanelekile ukwabiwa.
Ukuhamba-ngaphakathi kwephati yokubeka izimvo
eyakhiwe kwiibhedi zebhedi zamagumbi amancinci
Amaphupha amabi ngaphambi kwemikhono yekrisimesi
Iitattoo zentliziyo ezinamagama abantwana
ukuhombisa udonga olude lwegumbi lokuhlala